Global Voices teny Malagasy » Sivana Nihanjahanja: Fahitalavi-panjakana Iraniana Manapaka Fandaharana Eny Antenantenan’ny Fehezanteny · Global Voices teny Malagasy » Print
Sivana Nihanjahanja: Fahitalavi-panjakana Iraniana Manapaka Fandaharana Eny Antenantenan'ny Fehezanteny
Voadika ny 23 Avrily 2017 14:11 GMT 1	 · Mpanoratra Mahsa Alimardani Nandika Arimalala
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fanampenam-bava, Fifidianana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Olana teo amin'ny efijery nitranga nandritra ny fandaharan'ny Shabakeh Khabar tao amin'ny IRIB tamin'ny nilazan'ny mpanao gazety ny fisoratana anaran'ny kandidà Hamid Baghaei, Filoha Lefitra teo aloha ary mpitàna ny tsiambaratelon'i Mahmoud Ahmadinejad. Pikantsary avy amin'ny bitsiky ny fandaharan'ny Fars News.
Tanatinà fisomparana fandaharana tsy mahazatra tamin'ny herinandron'ny 14/04, notapahan'ny tambajotra ofisialin'ny haino aman-jerim-panjakana ao Iràna teny antenatenan'ny fehezanteny ny fahan'ny lahatsary mivantana avy amin'ny mpanao gazety tamin'izy nanonona ny anaran'ny kandidà amin'ny fifidianana filoham-pirenena, Baghaei Hamid, iray amin'ireo mpanao politika izay mampiady hevitra indrindra ary nameno ny firotsahana hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny volana manaraka.
Nitàna ny toeran'ny filoha lefitry ny filoha teo aloha Mahmoud Ahmadinejad i Baghaei. Samy matetika mampiseho fijoroana ara-politika toherin'ny maro izy roa ireo, ary ireo lehilahy roa ireo dia nisoratra anarana hirotsaka ho filoha amin'ny fifidianana any Iràna amin'ny May 2017.
Ilay fandaharana izay nalefa tao amin'ny fantsom-pahitalavitry ny Repoblika Islamika ao Iràna, Shabakeh Khabar, nanasongadina mpanao gazety iray fantatra ho Ramatoa Nouri, dia tao amin'ny Ministeran'ny Atitany tamin'ny Alarobia no noraketina an-tsary, raha nametraka ny taratasy fisoratany anarana ireo kandidà.
Niparitaka tamin'ny haino aman-jery sosialy ny rakitsarin'ilay zava-nitranga. Asehon'ilay lahatsary mazava tsara fa tsy nisy iray segondra akory nanononan'ilay mpanao gazety ny anaran'i Hamid Baghaei, dia tapaka tampoka ny fahan'ilay fandaharana ary niverina tamin'ny mpanolotra fandaharan'ny fahitalavitra tao amin'ny trano fitenenana. Raha niandry ny fiverenan'ny tatitra ilay mpanolotra fandaharana, re ny feon'i Nouri manontany ny mpamokatra fandaharany, “tsy tokony nanonona an'i Baghaei ve aho?”
Tsy nanome alalana ireo mpanao gazetiny hanambara ny fisoratana anaran'i Hamid Baghaei ho kandidà i Shabakeh Khabar.
Nanomboka nalaza tamin'ny fanasongadinana ireo sivana amin'ny fahitalavitra Iraniana ilay tenifototra #نگم_بقایی_رو  mandika ny fanontanian'i Nouri,”Tsy tokony nanonona Baghaei ve aho?”.
بنگاه خبرپراکنی دروغ و تزویر و سانسور ج.ا گاف سنگینی داد.#نگم_بقایی_رو  pic.twitter.com/bU0hib8RtF 
Mihalany henatra isanandro ny IRIB. Mpanao gazety mpandainga, fandaharana tapaka, ary voasivana. Betsaka loatra ireo #Tsy_tokony_nanonona_Baghaei_aho tavela.
Nanomboka tamin'ny 11 Aprily ary hitohy mandritra ny dimy andro ny fisoratana anaran'ireo kandidà ho an'ny fifidianana filohan'ny repoblika faha-12 ao amin'ny Repoblika Isalmikan'i Iràna, harahin'ny vanim-potoana izay hijerena ny fahaizana ara-politika sy islamikan'ireo olona nisoratra anarana ho ataon'ny Filànkevitr'ireo Mpiambina  sy ny fikambanana ara-pivavahana napetraka hanao ny fanamarinana. Matetika no ahintsan'ilay Filankevitra ny ankamaroan'ireo olona voasoratra anarana.
Fantatra ho toy ny mpitondra tenin'ireo fatra-pifikitra amin'ny nentin-drazana ny fahitalavitry ny Repoblika Islamikan'i Iràna (IRIB), mampita ny olana sy ny hevitr'ity fanjakana ity. Ny fitantanana ny IRIB mivantana dia toerana ambony indrindra notendren'ny fahefana ambony ao amin'ny firenena, ny Mpitarika Farantampony Ayatollah Khamenei.
Mikasika ny tatitra momba ny fifidianana, ny fanapahankevitry ny IRIB momba ny hoe iza no tononina — ary iza no sivanina — dia matetika hita ho toy ny taratry ny fihetsehampo anatiny momba ireo mety ho kandida. Ny fanapahana ny tatitry ny Nouri dia marika fa mety hihitsana amin'ny fifaninanana i Baghaei.
Tsy fantatra raha efa nahalala sahady i Nouri tsy hitatitra momba ny fisoratana anaran'i Ahmadinejad ihany koa, na tonga dia niova hevitra izy taorian'ny zava-nisy.
Ny Filoha mpanandra-tena teo aloha maha-be adihevitra, Mahmoud Ahmadinejad, manambara ny fikasany hirotsaka ho Filoha amin'izao fotoana izao ao amin'ny fifidianana Filoham-pirenena Iraniana hatao amin'ny volana May. Izy no eo akaikin'i Hamid Baghaei avy aty amin'ny ankavia, ary Mashaei no aty amin'ny ankavanana. Sary nozaraina tao amin'ny Twitter, avy amin'i Mohammad Ali Marizad
Nameno ireo lohateny vaventy ny fisoratana anarana tamin'ny Alarobia raha nosakanan'ny Minisitra tsy hanambara fa izy sy Baghaei dia efa voasoratra anarana ny filoha teo aloha Mahmoud Ahmadinejad, otronin'ireo mpitazona ny tsiambaratelony, ny Filoha Lefitra teo aloha Baghaei sy ny Lehiben'ny Mpiasa Esfandiar Mashaei, .
Fiovan'ny toe-draharaha ho an'i Ahmadinejad izany, izay nanambara tamin'ny Septambra 2016 fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana, rehefa avy nampitandreman'ilay Mpitarika Farantampony fa ny firotsahany hofidiana dia mety hiteraka fisaraham-bazana eo amin'ny fiarahamonina Iraniana. Raha voarara ihany koa tamin'ny firotsahana hofidiana indray tamin'ny 2013 aza, nanao fampielezankevitra ho an'ny firotsahan'i Mashaey izay tsy nahazo ny fankatoavan'ny Filankevitry ny Mpiambina i Ahmadinejad, fampielezankevitra ho amin'ny fanendrena an'i Mashaei.
Fantatra amin'ny fampidirana fitongilanana sy sivana amin'ny tatitry ny fifidianana ny IRIB. Nandritra ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2013, maro tamin'ireo kandidà no nanamarika ny fandrakofana sy ny fampiasana sivana tsy an-drariny tao amin'ny IRIB. Nampangain'i Rouhani ho nanala baraka olo-malaza ilay fahitalavi-panjakana nandritra ny resadresaka tamin'ny 27 May 2013 , rehefa injay ny fampielezankevitry ny kandidà liam-pivoarana Mohamad Reza Aref niampanga ny IRIB  ho nanapaka taminà “fomba tsy mendrika” ireo fivoahany nandritry ny fampielezankevitra.
Raha Iraniana an-tapitrisany maro no manaraka ilay fahitalavitra, dia malaza amin'ny tsy fanomezana sehatra ireo izay tsy mifanaraka amin'i Khamenei sy ny mpiasa ao aminy izy, ary miaro ny tombontsoan'ny sampam-pitsikilovana Iraniana, indraindray tonga hatramin'ny fanerena ny gadra politika handefa fiaikena an-terisetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/23/98230/
 April 12, 2017: https://twitter.com/Parpanchi/status/852087762551484416
 April 12, 2017: https://twitter.com/AugustvonHayek/status/852100064990420992
 Filànkevitr'ireo Mpiambina: https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Council
 resadresaka tamin'ny 27 May 2013: http://www.youtube.com/watch?v=tb--KR-jY8I
 niampanga ny IRIB: http://www.rferl.org/a/iran-rohani-rezai-state-broadcaster-censorship/25000617.html